Samsung ရဲ့ Galaxy S10 5G ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
က Galaxy S10 5G တဲ့အကွာအဝေး-topping Samsung ကအပေါငျးတို့သထူးခြားချက်ရှိပါတယ်. တစ်ဦးကကြီးမားသော, တောက်ပသောမျက်နှာပြင်, ချောမွေ့ပြောင်လက်ဒီဇိုင်း, အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း - Samsung ရဲ့ S10 မျိုးကွဲမဆိုအကောင်းဆုံး.
ကုမ္ပဏီရဲ့ S-line ကိုရှငျဘုရငျကိုဗြိတိန်၌အကောင်း 5G ဖုန်းများများ၏လက်တဆုပ်စာပူးပေါင်းမည်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောကြီးမားသောဖုန်းချစ်သူများအဘို့ဖြစ်၏
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ရဲ့ Galaxy S10 5G ပြန်လည်သုံးသပ်: ပိုကြီး, ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးရှည်ကြာ” ရှမွေလသည် Gibbs စားသုံးသူနည်းပညာအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 21 သြဂုတ်ပေါ်များအတွက် 2019 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
က Galaxy S10 5G အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, Samsung ရဲ့လက်ရှိ lineup အတွက်အများဆုံးအဆင့်မြင့်နှင့်စျေးအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်း, "ဟုအဆိုပါ 5G တဦးတည်း" ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်ခြင်းမှာမဟုတ်ရုံရည်ရွယ်.
အဆိုပါမတူဘဲ OnePlus7Pro ကို, အရွယ်အစားတူညီဖြစ်ကြောင်း 4G သို့မဟုတ် 5G ဗားရှင်းဖြစ်စေကြွလာတော်မူသော, အလေးချိန်နှင့်အင်္ဂါရပ်, ယင်း S10 5G ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်း. ဒါဟာပိုကြီးင်, လေးလံ, ထူနှင့်ထက်နောက်ကျောနှင့်မျက်နှာစာပိုမိုကင်မရာများနှင့်အာရုံခံကိရိယာများရှိပါတယ် S10 +.
အိမ်ရှေ့အဆိုပါ 6.7in QHD + AMOLED မျက်နှာပြင်အားဖြင့်ပြည့်စုံသည်, နှစ်ဖက်စလုံးမှာထားတဲ့ခါးဆစ်နှင့်ကြီးမားသောဘဲဥပုံ-shaped နှစ်ခု selfie ကင်မရာနှင့်အတိမ်အနက်ကိုအာရုံခံကိရိယာများအတွက် display ကိုရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထွက်ဖြတ်ရှိပါတယ်.
မျက်နှာပြင်ကယ့်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သင်တစ်ဦးကထိပ်တန်းက Samsung အဘို့ကိုမျှော်လင့်ချင်ပါတယ်အဖြစ်: တောက်ပ, ကြည်လင်ပြတ်သားစွာနှင့်ကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုထောင့်နှင့်အတူရောင်စုံ. ဒါဟာ OnePlus အပေါ်စိတ်ကူး 90Hz မျက်နှာပြင်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်တောက်ပသို့မဟုတ်ချောမွေ့မဟုတ်ပါဘူး7Pro ကို, အားလုံးကြွင်းသောအရာထက်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့.
အဆိုပါ selfie ကင်မရာနှင့်အာရုံခံကိရိယာများမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ရှိဘဲဥပုံ-shaped အပေါက်မှတဆင့်ပြီးမှ, အခြေအနေပြဘားတွင်သတိပေးချက်အာကာသကိုတက်ယူပြီး. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါဧရာမျက်နှာပြင် S10 5G ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဖုန်းကိုဆိုလိုသည်. ယင်း S10 5G 5G မှအလားတူနှိုင်းယှဉ်အရပ်ရှည်ရှည် 77.1mm ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် 162.6mm မှာထိုကဲ့သို့သော OnePlus အပြိုင်7Pro ကိုဒါမှမဟုတ် 4G သာ iPhone ကို XS မက်စ်. ဒါပေမယ့်နောက်ကျောဘက်မှာ tapers လမ်းနှင့်၎င်း၏နှိုင်းယှဉ်အလင်း 198g အလေးချိန်, အရာ 8-10g အားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင် undercuts, ယင်း S10 5G ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲစေသည်. ကျွန်မယောက်ျားရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲမှာ fit နိုင်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တစုံတခုကိုမျှနေတဲ့ရုန်းကန်ခဲ့.
သငျသညျဖုန်းများနှင့်အလေးချိန်၏, အားနည်းချက်တွေ၏အကြီးမားဆုံးချင်ကြပါဘူး အကယ်., ပေးရ, အရွယ်, တဦးတည်းလက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, စသည်တို့ကိုသူတို့နှင့်အတူလာ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အပါဆုံးကျိန်းသေမဟုတ်ပါဘူး.
အဆိုပါ display ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏လက်မနှင့်အတူဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဘို့အ Samsung ရဲ့ ultrasonic လက်ဗွေစကင်နာဖုံးကွယ်, အရာကောင်းစွာအလုံအလောက်အလုပ်လုပ်တယ်ပေမယ် OnePlus အပေါ် optical sensor ကိုအတိုင်းအစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်တိကျမှုမဟုတျပါဘူး7Pro ကို 5G သို့မဟုတ်ရိုးရာလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ.
အဆိုပါဖုန်းကိုနိုင်ငံတကာ IP68 စံဖို့ရေခံနိုင်ရည်, အထိသို့မဟုတ်နက်နဲသောပင်လယ် 1.5 လတ်ဆတ်တဲ့ရေထဲမှာမီတာ 30 မိနစ်. အိမ်သာထဲမှာ S10 5G drop နှငျ့သငျနောက်မှသူကသုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအစတစ်ဦးနားကြပ် socket ရှိပါတယ်, ရှားပါးအရာဖြစ်ပါသည် 2019.
Screen ကို: 6.7QHD + AMOLED အတွက် (502ppi).
processor: Samsung က Exynos 9820 သို့မဟုတ် Qualcomm Snapdragon 855.
ရမ်: 8RAM ကို GB ကို.
သိုလှောင်ခြင်း: 256GB ကို.
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: အန်းဒရွိုက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုမှာ UI ကို9ဌပနာမုံ့.
ကင်မရာကို: နောက်ဘက်သုံးဆကင်မရာ + အတိမ်အနက်ကိုအာရုံခံကိရိယာ, ရှေ့ 10MP selfie-ကင်မရာ + အတိမ်အနက်ကိုအာရုံခံကိရိယာ.
connectivity ကို: တစ်ခုတည်း sim, LTE ကို, 5က G, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 5, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နှင့် GPS စနစ်.
ဒိုင်မန်းရှင်း: 162.6 x က 77.1 x က 7.9mm ကိုယ်ထည်.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု၏တစ်ဦးကို USB-C ကိုဆိပ်ကမ်းနှင့်တစ်နားကြပ် socket ယူစောင့်ရှောက်မှု. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
က Galaxy S10 5G အတူတူ Processor ကိုရှိပါတယ်, အခြားအများစုအဖြစ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိုလှောင် က galaxy S10 ဗားရှင်းထို့ကြောင့်အလားတူလုပ်ဆောင်. ဒီအမေရိကန်၌ဤ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon ဆိုလိုတယ် 855 Processor ​​ကို, ဒါပေမယ့်အင်္ဂလန်အတွက်, ဥရောပနှင့်တခြားဒေသများက Samsung ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Exynos ဆိုလိုတယ် 9820, ဤနေရာတွင်စမ်းသပ်ပြီးအဖြစ်.
ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်း-ခံစားမှုဖုန်းကိုဖွင့်, လျှင်မအတော်လေးအမြန်ဆုံး, သင်မှာအပစ်နိုင်ပါတယ်အရာကိုအများဆုံးကိုင်တွယ်ဦးမည်. ဂိမ်းများနှင့်တိုးပွားအဖြစ်မှန်အတွေ့အကြုံများ, အရာ 5G နှင့်အတူခက်ခဲတွန်းလျက်ရှိသည်, ချောမွေ့ခဲ့ကြပေမယ့်ဖုန်းကိုဖန်ဆင်းအတော်လေးနည်းနည်းတက်အပူ.
အဆိုပါ S10 5G Samsung ရဲ့ S10 ဖုန်းကိုလိုင်းတွင်အကြီးဆုံးဘက်ထရီရှိပြီးဒါမှာအရှည်ဆုံးကြာ 36 စွဲချက်အကြားနာရီ. မျက်နှာပြင် FHD + resolution ကိုနှင့်အစဉ်အမြဲ-On Display ကို default ဟုသတ်မှတ်နှင့်အတူ (AOD) ဖြုတ်ထုတ်ပစ်သည်, ဖုန်းကိုမျှမျှတတမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူနေ့ကနှစ်ခုအပေါ် 7pm သည်အထိနေ့ကတဦးတည်းအပေါ် 7am ကနေလုပ်, အဓိကအားဖြင့် 4G အပေါ်လန်ဒန်မှာဘယ်မှာရှိနိုင်ပါက Vodafone ရဲ့အသစ် 5G network ကမှာပြင်းစွာတိုက်နှင့်အတူ.
အဆိုပါ S10 5G လည်းပိုမြန်သေတ္တာထဲတွင်ထည့်သွင်းမယ့် 25W charger နဲ့ Samsung ရဲ့အခြားအဖုန်းများထက်အားသွင်းနေသည်. ဒါဟာ hit 90% တစ်နာရီအတွင်း, ဆဲအမြန်ဆုံးအားသွင်းဖုန်းကိုပေးသောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခြားက Samsung Device များကျော်သိသိသာသာတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်. ကြိုးမဲ့ Matt ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်အားသွင်းမယ့် Qi နှင့်အတူအထိ 15W မှာအားသွင်း, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် S10 5G များ၏နောက်ကျောကနေအခြားအရာတစ်ခုခုအားသွင်းကြိုးမဲ့ပါဝါခွဲဝေမှုမအဖြစ် Samsung ၏ Galaxy ဘူးသီး.
အဆိုပါ S10 5G ရဲ့ 4G စွမ်းဆောင်ရည်ပုံမှန် S10 ထက်ပိုဆိုးခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးအတူတူ Vodafone ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပြိုင်ဖက်ထက်ပိုဆိုးဖျော်ဖြေ. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါ S10 5G Vodafone ရဲ့အသစ် 5G network ပေါ်မှာအကြီးအသက်သေပြ, အရာတဲ့အခါမှာရရှိနိုင် 4G ထက်သိသိသာသာပိုမြန်ခဲ့, ပုံမှန် Vodafone ရဲ့ 4G ကွန်ယက်ကို 20-50Mbps န်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရှိရာဒေသများရှိ 200Mbps ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းကိုစီမံခန့်ခွဲ.
သို့သော် Vodafone ရဲ့ network ပေါ်ရှိ S10 5G ရဲ့ 4G စွမ်းဆောင်ရည်ဆငျးရဲသားခဲ့, ဘယ်မှာ OnePlus ဒေသများရှိ 3G ဆင်းကျဆင်းနေအချိန်သိသိသာသာငွေပမာဏဖြုန်း7Pro ကိုနှင့် Huawei P30 Pro ကိုအတူတူ Vodafone 4G ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ခိုင်ခံ့သော 4G signal ကိုရှိခဲ့တယ်. အဆိုပါကိစ္စကိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အထူးသဖြင့်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်.
က Galaxy S10 အပါအဝင်ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏ပုံမှန် 4G ဖုန်းများကို - ဤဆင်းရဲသောစွမ်းဆောင်ရည် Vodafone ရဲ့ 4G network ပေါ်မှာဆင်းရဲသောသူကို signal ကို performance ကို Samsung ရဲ့အသစ်က 5G ဖုန်းအထီးကျန်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည့်နောက်ထပ်စမ်းသပ်ဖို့မြင့်တက်ပေးခဲ့တယ်. အဆိုပါ 4G သာဖုန်းများတူညီသောကွန်ယက်ပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ 5G counterparts တွေကိုကျော် signal ကိုအစွမ်းသတ္တိ၏ပတ်ပတ်လည်တစ်ဝက်တစ်ဘားအနည်းငယ်အားသာချက်ခဲ့.
သို့သော်, က Samsung ဖုန်းများ 3G ဆင်းကျဆင်းသွားသည့်အခါ၎င်းတို့၏အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုထိရောက်စွာ web စာမျက်နှာများနှင့်အက်ပ်များမှအရာအားလုံးဖြစ်စေတဲ့အသုံးမပြုနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပင်အီးမေးလ်, ထွက်အချိန်. ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာအော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ခြင်းထက်ပိုဆိုးမယ့်, ဖုန်းကအလုပ်လုပ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ထင်အဖြစ်, ဖုန်းကိုအစဉ်မပြတ်တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ပြီးနောက် time out ဖြစ်ခြင်းမတိုင်မီသင်ကသတ်မှတ်ထားပါဘူး task ကိုဖျော်ဖြေဖို့ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားရှိရာတစ်ဦးအလွန်စိတ်ပျက်စရာမြင်ကွင်းမှဦးဆောင်.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, Samsung ရဲ့ S10, S10 + နှင့် S10e အဆိုပါ OnePlus ကဲ့သို့တူညီသောဖျော်ဖြေ7Pro ကိုနှင့် Huawei P30 Pro ကို (ကွန်ယက်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အကောင်းဆုံးနှစ်ခု) EE နှင့်သုံးမယ့်နှစ်ဦးစလုံး 4G လန်ဒန်နှင့်အနီးတဝိုက်ကွန်ယက်နှင့်အင်္ဂလန်၏တောင်ဘက်အပေါ်. အဆိုပါပြဿနာသည် Vodafone အပေါ်ဖြစ်သာသည်ထင်ရှား. သို့သော် Vodafone မဟုတ်သလို Samsung ကမ Samsung က S10 5G နှင့်အခြား S10 စမတ်ဖုန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ signal ကိုကိစ္စရပ်များကိုရှင်းပြနိုင်.
တစ်ဦးက Vodafone ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်: "ကျနော်တို့ပြည်တွင်းရေးစမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်စက်ကိရိယာနှင့် SIM ကိုပြန်ပြောပြပါတယ်. ကျနော်တို့ကိုသူတို့ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ပိုကောင်းမည်သည့်ကိစ္စများနားလည်ပြီးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်မှုတွေနိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့တွေ့ရသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုနားလည်ရန်သွားရောက်ခဲ့သည်ထားသောဧရိယာများတွင်ဂါးဒီးယန်းနှင့်အတူန်းကျင်လမ်းလျှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကြိုဆိုလိမ့်မယ်။ "
တစ်ဦးက Samsung ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ 4G ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်အစားကပြောပါတယ်: 5G network ကလွှမ်းခြုံတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့အဖြစ် "ဒီ 5G အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုသာပိုကောင်းရမယ့်. Samsung ကစားသုံးသူတွေဟာအကောင်းဆုံးကွန်ရက်ကစွမ်းဆောင်ရည်အရနိုင်အောင် device ကိုမှ updates များကိုပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ "
Samsung ကတစျခု UI ကို
Samsung ရဲ့တစ်ဦးက UI ကိုကောင်းလှ၏, သို့သော်၎င်း၏အမူအရာအညွှန်းရွေးချယ်စရာမျက်နှာပြင်နှင့်တသားတလက်နှင့်အတူဤအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲ. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
က Galaxy S10 5G ကို Android ၏ Samsung ရဲ့အသစ်သောတစ်ခုမှာ UI ကိုဗားရှင်းပြေး9ဌပနာမုံ့, အခြား S10 မျိုးကွဲကဲ့သို့တူညီသောအရာဖြစ်ပါသည်.
တဦးတည်း UI ကို Samsung ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲယခင်ဗားရှင်းကျော်ကြီးမားတဲ့အဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးအသုံးဝင်ကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်အတူဖုန်းများအောင်လှည့်ပတ်ပြန်လည်အာရုံစိုက်, အရာကဒီမှာအသုံးဝင်သောခဲ့သည်. မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းသတင်းအချက်အလက် display ကိုများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျထိရှိသည် bits သည်အောက်ခြေကိုဦးတည်ရွှေ့ပြီးပါပြီစဉ်.
မရှိတယ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာအသက်ကောင်းစွာ Samsung ရဲ့အမူအရာအညွှန်း options များဖြစ်ကြသည်, ခလုတ်ဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်ပွတ်ဆွဲ pads နှင့်အတူမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်အစဉ်အလာသုံး-key ကိုကျွန်တော်တို့ navigation bar ကိုအစားထိုးထားတဲ့. ဒါဟာအရည်အတှေ့အကွုံမဟုတ်ပါဘူးနှင့်မျက်နှာပြင်၏ဤအရွယ်အစားပေါ်တဦးတည်းလက်ကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည်.
ပိုကြီးတဲ့က Galaxy S10 + ပိုမိုအကျိုးရှိသောနေစဉ်, ယင်း S10 နေဆဲယေဘုယျအားဖြင့်ထိတွေ့-based interaction ကအတှကျသတင်းအချက်အလက်နှင့်အောက်ခြေတစ်ဝက်ကြည့်ရှုဘို့ဖုန်းရဲ့ထိပ်တစ်ဝက်ရှိခြင်းကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ. ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသောကြောင့်ပြိုင်ဘက်စနစ်များ OnePlus, ဟွာဝေး သို့မဟုတ်ပင် Google ၏လာမည့် အန်းဒရွိုက်မေး ဝေး သာ. ကောင်း၏.
နောက်ကျောအပေါ်ကင်မရာစနစ်က Samsung ရဲ့လက်ရှိ lineup ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, အများဆုံးပြိုင်ဘက်နှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ခြင်းပေမယ့် Huawei ၏စံချိန်တင်မြင့်တက်၏တိုတောင်းသောကျဆင်း. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
က Galaxy S10 5G အတွက် S10 နှင့် S10 + အဖြစ်နောက်ကျောတွင်တူညီသောသုံးခုပုံမှန်ကင်မရာများရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ကောင်းသောအတိုင်းအတာတစ်ခု 3D အတိမ်အနက်ကိုကင်မရာကဖြည့်စွက်.
ဒါကသင်တစ်ဦးအဓိက 12-megapixel ကင်မရာ get ကိုဆိုလိုသည်, 12--megapixel telephoto ကင်မရာနှင့်ထံမှ zoom ကိုပေးမယ့် 16-megapixel ကင်မရာက ultra-wide angle ကိုကင်မရာက 0.5 2x မှ, ပြီးတော့တစ်ဦး 10x စပ် zoom ကိုမှပေါ်.
ယင်း S10 5G နှင့် S10 / S10 + ပေါ်တွင်အဆိုပါကင်မရာများအကြားသိပ်ကွာခြားချက်ရှိပေါ်လာဘူး. ဒါဟာကောင်းသောအလငျး၌အချို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတ်ပုံများထုတ်လုပ်, အစိုင်အခဲမဟုတ်လူတန်းစား-ဦးဆောင်နိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ, အသစ်ကညဥ့် mode ကိုရှိနေသော်လည်း.
video capture အလွန်ကောင်းသည်, များစွာသောပြိုင်ဘက်ထက်ပွဲတစ်ပွဲပိုကောင်း, ပျော်စရာအတိမ်အနက်ကိုသက်ရောက်မှုများ S10 5G ပေါ်တွင်အပိုအာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု. နှင့်အတူ. အဆိုပါ selfie ကင်မရာ S10 + အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, မြတ်သောသော.
ယေဘုယျအား, ယင်း S10 5G အပေါ်ကင်မရာကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်၏တိုတောင်းသောကျရောက် ဟွာဝေးကနေအကောင်းဆုံး.
အဆိုပါဖန်ပြန်ထိပ်နှင့်နှစ်ဖက်မှာသတ္တုတီးဝိုင်းဆီသို့အတွက် tapers. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါ ultrasonic လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာအရှိဆုံးမျက်နှာပြင်ကာကွယ်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ, ဒါပေမယ့်လိုက်ဖက်တ box ထဲမှာထည့်သွင်းကောင်းပါသည်.
အဆိုပါ haptic တုန်ခါပြီးခဲ့သည့်နှစ်မော်ဒယ်ထက်ထက်များမှာ, Apple ၏ iPhone သို့မဟုတ် OnePlus အဖြစ်ပေမယ်အဖြစ်မကောငျး7Pro ကို.
စွန်ပလွံငြင်းပယ်ခံရသည့်ကွေးမျက်နှာပြင်အစွန်းအပေါ် mis-ထိကာကွယ်ပေးနိုင်မှာကောင်းသောခဲ့, အခါသင်ချုပ်ကိုင်သင်၏လက် touchscreen ကအပေါ်မှာကျိန်းဝပ်ရာအရပ်,.
အဆိုပါ Samsung ရဲ့ Galaxy S10 5G ကုန်ကျစရိတ် £ 1,099 တစ်ခုခုအပေါ်ဦးရစ်သရဖူ, ငွေသို့မဟုတ်ညားအနက်ရောင်ထဲမှာ OF သို့မဟုတ် Vodafone. သ, ဖုန်းကိုအင်္ဂလန်အတွက်ကို standalone နှင့်ဆင်းမ်ကဒ်-အခမဲ့ဝယ်ဖို့မရရှိနိုင်.
နှိုင်းယှဉ်, ယှဉ်ပြိုင်ဘို့ကိုထောက်ခံအုကူံလက်လီစျေးနှုန်း OnePlus ပါဝင်သည်7မှာစတင်အစီအစဉ်များအပေါ် Pro ကို 5G EE အပေါ်£ 59 တစ်လ, အဆိုပါ 4G 6.4in က Galaxy S10 + ဘို့ £ 899, ထို 4, G OnePlus7Pro ကို ကနေ £ 649, အဆိုပါ 4G Google က Pixel3XL ကုန်ကျစရိတ်များ £ 744, အဆိုပါ 4G Huawei က P30 Pro ကို ဘို့ £ 899 နှင့် 4G iPhone ကို XS မက်စ် ကုန်ကျစရိတ်များ £ 1,099.
က Galaxy S10 5G တဲ့အကွာအဝေး-topping Samsung ကအပေါငျးတို့သထူးခြားချက်ရှိပါတယ်. တစ်ဦးကကြီးမားသော, တောက်ပသောမျက်နှာပြင်, ချောမွေ့ပြောင်လက်ဒီဇိုင်း, အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း – Samsung ရဲ့ S10 မျိုးကွဲမဆိုအကောင်းဆုံး.
နောက်ဘက်ကင်မရာလည်းအလွန်ကောင်းလှ၏နဲ့ Samsung ရဲ့တစ်ဦးက UI ကိုကြီးလှ၏, နေသမျှကာလပတ်လုံးပွတ်ဆွဲအမူအရာကိုဖုန်း၏ဤအရွယ်အစားအပေါ်သုံးစွဲဖို့ခက်ခဲသကဲ့သို့သင်တို့အညွှန်းခလုတ်သုံးပြီးပျော်ရွှင်နေအဖြစ်. ဒါဟာကြီးမားတဲ့နှင့်စျေးကြီးသည်, သာကြီးမားသောဖုန်းချစ်သူများကိုပင်သူကကြိုးစားအသုံးပြုချင်သွားကြသည်အဓိပ္ပာယ်.
၎င်း၏ 5G စွမ်းဆောင်ရည် Vodafone ရဲ့အသစ် 5G network ပေါ်မှာအစိုင်အခဲဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမယ့် S10 5G နှင့်၎င်း၏သေးငယ် S10 မောင်နှမ၏ Vodafone အပေါ်ဆင်းရဲသောသူကို 4G စွမ်းဆောင်ရည်ကို, သောကွန်ရက်တစ်ခုမဟုတ်သလို Samsung ကမရှင်းပြဖို့စီမံခဲ့ကြ, ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန် Vodafone အပေါ်မည်သည့်ထိပ်တန်းအဆုံးက Samsung ဖုန်းကိုဝယ်ယူမဟုတ်အကြံပြုဆိုလို.
ဒါဟာအတော်လေးယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး 5G အတွေ့အကြုံကိုမကျမည်အကြောင်း - ကြောင်း OnePlus င်7Pro ကို 5G - ဒါပေမယ့်ပြေးအရာနီးစပ်င်. ထိုအခါ OnePlus ဗြိတိန်အတွက်သီးသန့်အနေနဲ့ EE သည်အဘယ်မှာရှိ, ယင်း S10 5G မိုဘိုင်းကွန်ရက်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေါ်ရရှိနိုင်.
အဆိုပါ S10 5G သငျသညျဝယျနိုငျအကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးက Samsung ဖြစ်ပါသည်, အနည်းဆုံးသည်အထိ မကြာသေးမီကစတင်မှတ်ချက် 10 စတိုးဆိုင်များတွင်ရောက်ရှိ, ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုယူနိုင်တဲ့အရာ.
အကောင်းအဆိုး: အလွန်ကြီးစွာသောမျက်နှာပြင်, ultrasonic In-Display ကိုလက်ဗွေစကင်နာ, အပေါက်-လာကြတယ်ထစ်, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နှင့် powershare, အလွန်ကြီးစွာသောကင်မရာက, ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှု, ကောင်းသောဆော့ဖျဝဲ, ကောင်းသော haptics, နားကြပ် socket, microSD card slot, 5က G. Cons: ဧရာဖုန်းကို, စျေးကြီး, Vodafone အပေါ်ဆင်းရဲသားကို 4G စွမ်းဆောင်ရည်ကို, နှေးကွေးသောဆော့ဖျဝဲ updates များကို.
ငွေပြန်လှည့်ပတ်သညျအလငျးနဲ့အရာဝတ္တုအပေါ် မူတည်. နှစ်သက်အရောင်များကိုအရောအနှောထဲမှာထွန်းလင်း. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2019: iPhone ကို, Samsung က, Huawei နှင့် Google မှနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အဆင့်
Samsung ရဲ့ Galaxy S10 + ပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်ရိုးရှင်းစွာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်
Samsung ရဲ့ Galaxy S10 ပြန်လည်သုံးသပ်: မွှေးပွဲချင်းပြီး
OnePlus7Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: တိုင်းလမ်းအတွက်ပကတိသားရဲ၏
Huawei က P30 Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကင်မရာ, ကြယ်ဘက်ထရီသက်တမ်း
← ဂုဏ် 20 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း £ 1,000 များအတွက်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အတွက်အကောင်းဆုံးကို PC ကဘာလဲ? →